ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်း မတင်ဘဲ ဦးနှောက် နဲ့စဉ်းစားပြီး ရှေ့ဆက်တော်လှန်သင့် ကြောင်း သုံးသပ် ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်း မတင်ဘဲ ဦးနှောက် နဲ့စဉ်းစားပြီး ရှေ့ဆက်တော်လှန်သင့် ကြောင်း သုံးသပ် ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်အောင်လည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ဝေမျှပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညစဉ် ၈ နာရီရောက်တိုင်းလည်း သူမရဲ့အိမ်ရှေ့တွင် သံဗုံးတီးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဖြူဖြူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးရှေ့ဆက်တော်လှန်သင့်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကအမှတ်ပေးဝန်းရံပေးနေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို အပျက်စီး မခံသင့်ကြောင်းကိုလည်း အခုလို ရှင်းပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” သတ်တယ်။
ဘာလို့သတ်တာလဲ? အဖြေကအများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့်…၂ ခုပဲအရင် ပြောမယ်။ ကြောက်အောင် နဲ့ ဒေါသထွက်အောင်။ အဲ့ဒီ ၂ ခုကတွဲနေတတ်တယ်။ လက်စားချေဖို့၊ အကြမ်းဖက်ဖို့၊ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖို့ ဆီကိုဦးတည်တယ်။
အခုကမ္ဘာကြီးကအမှတ်ပေးဝန်းရံနေတဲ့ peaceful protest by the people of Myanmar ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကောင်းကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ချင်တာပဲ။ အဲ့ဒါပျက်စီးသွားလို့မရဘူး။
အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ? ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းမတင်ပဲ ဦးနှောက်နဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်မယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ရှေ့တန်း နောက်တန်း ပိုစည်းလုံးမယ်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ်။ ” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
Source and Photo Crd-Phyu Phyu Kyaw Thein’s Facebook Page
Previous post သွေးခွဲတိုင်း ကွဲရအောင် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ မှာ မျက်စိတွေ နားတွေ ပါပြီး အခု ဆို ရင် မိသားစု တစ်ခုတည်း လို ဖြစ်သွားပြီ လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ နေတိုး
Next post ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မယ့် ပြည်သူတွေကို လို အပ်တဲ့ အကာ အကွယ် ပစ္စည်းတွေ အကုန်လာယူကြပါ ဆိုပြီး ရက်ရက်ရော ရော လှူနေတဲ့ အိမ့်ချစ်